Puntland: Hadalkii $1-ka Milyan Ee DF Wuxuu Ahaa Mid La Iska Yiri, Waxna Nama Soo Gaarin * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Garowe, Mareeg.com: Maamulka Puntland ayaa sheegay inaan waxba kazoo gaarin lacag dhawaan golaha wasiirada Soomaaliya uga dhawaaqeen Muqdisho, loona qoondeeyey in lagu taageero dadkii dhibaatadu kazoo gaartay duufaantii iyo roobabkii ku dhuftay qaar ka mid ah deegaanada Puntland.
Wasiirka qorsheynta, xiriirka caalamiga iyo arrimaha Federaalka ee maamulka Puntland Maxamuud Ceydiid Dirir ayaa sheegay in balan qaadkii Dowladda ee lacagta halka Milyan ay ahayd mid la iska yiri, welina aysan soo gaarin.
“Lacagtii Halka Milyan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku deeqday ee dhibaatadii ka dhalatay duufaanta waxba nagama soo gaarin, waa hadal la iska yiri oo aan wax qorshe ah looga tala gelin” ayuu yiri Maxamuud Ceydiid Dirir oo saaka u warramay BBC.
Waxa uu intaasi ku daray wasiirka in ay tahay wax lala yaabo in xukuumadda Soomaaliya aan masuuliyad iska saarin gurmadka loo fidinayo dadkii ku dhufatay duufaantii 03A, iyadoo heysa masuuliyad weyn.
Sidoo kale waxaa uu mar kale ku celiyay in aanay diyaar u aheyn inay qaabilaan wafdi siyaasadeed, hadalkaas oo maamulka Puntaland ku dhawaaqay markii xdukuumadda Soomaaliya ku dhawaaqday iney $1 Milyan dollar ugu deeqayaan dadka roobabka iyo dufaanku saameeyeen.
Wasiirka ayaa tilmaamay in ay ku mashquulsan yihiin howlaha gurmadka dhibaatadii ka dhalatay duufaanta Puntland ku dhifatay.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaan ka hadlin wararkii horay ugu soo baxay maamulka Puntland, sidoo kale lama sheegin ilaa hadda wax ka socda dowladda Soomaaliya oo gargaar ah, oo la gaarsiiyey Puntland.